Baakadaha: nooca 2020. Ku saabsan cilmiga deegaanka, dhaqaalaha iyo wax yar oo ku saabsan qaabeynta - Nidaamka Baradhada
в Isbeddellada / Isbeddellada, Ecology, Dhaqaalaha
Guddiga tifaftirka ee majaladda Nidaamka Baradhadu waxay hindisay maqaal ku saabsan waxa baakadaha casriga ah ee baradhada iyo khudaarta ay tahay inay noqdaan bilowga sannadka 2020. Waxaan jeclaan lahaa inaan dib u milicsado qaababka loo soo raro badeecadaha inta badan wadamada yurub, dareenka shirkadaha shisheeye ee deegaanka, diidmada balaastigga iyo rajada laga qabo horumarinta fikradahan ciida Ruushka. Laakiin masiibo ayaa dhacday oo adduunku wuu is beddelay. Xalal noocee ah ayaa weli ku habboon?
HALKA SII JOOGTADA
«Xaqiiqdii, - wuxuu sharxayaa Vera Bokareva, tababaraha ganacsiga, la taliyaha, khabiir madax bannaan oo ka tirsan suuqa baakadaha iyo afhayeenka joogtada ah ee dhacdooyinka warshadaha ee ka hadlaya horumarinta warshadaha baakadaha, - shirkadaha waaweyn ee adduunka, silsilado tafaariiq caan ah, oo sanadihii la soo dhaafay shaaciyay baahida loo qabo in la abuuro dhaqan adeegsi mas'uul ah isla markaana ay sameeyeen qorshayaal ay ku soo saarayaan 100% baakadaha dib loo cusboonaysiin karo, ayaanan ka tanaasulin qorshayaashooda oo ay sii wadaan inay u shaqeeyaan si waafaqsan barnaamijyadii horay loo soo saaray ee la qaatay. Isbeddelka waara ayaa dheer. Tan waxaa lagu xaqiijiyay barnaamijyada tirada badan ee transnationals, oo tilmaamaya qorshooyinka u dhigma ilaa 2025 iyo 2030. ".
In kasta oo aan la dhihi karin aafada guud ahaan wax saameyn ah kuma yeelan waaxda baakadaha. Ugu horreyntii, aragtida ku aaddan baakadaha polymer-ka ayaa is beddelay - labadaba Ruushka iyo adduunka oo dhan. Sida laga soo xigtay khabiirka, bani'aadamku wali ma helin badbaado caafimaad iyo ikhtiyaar wax soo saar faa'iido leh.
Maxaa laga filan karaa mustaqbalka? Vera Bokareva waxay xustay in bulshada adduunka mawduuca adeegsiga caqliga leh ee kheyraadka iyo ilaalinta dabeecadda ay ahaan doonto mid ka mid ah kuwa ugu khuseeya sanado badan. Durba waxaa jira xalal badan oo xiiso leh oo ku saabsan suuqa Yurub: soo saarayaasha ayaa isku dayaya inay adeegsadaan inta badan alaabada dib loo rogay, caan ka ahaanshaha baakadaha qashinka dhirta (oo ku saleysan hadhuudh, algae, diirka yaanyo, qolafta gabbaldayaha, iwm.) Xarumo wax soo saar ayaa laga dhisayaa, kaliya ma ahan Yurub, laakiin sidoo kale dalalka Aasiya.
Nasiib darrose, Ruushku weli aad buu uga hooseeyaa jihadaas, gaar ahaan haddii aan si toos ah uga hadalno baakadaha miraha iyo khudradda. Sababta ugu weyn, marka laga eego khabiirka aragtidiisa, ayaa ah in silsiladaha gobolka ama tafaariiqda midkoodna uusan soo rogin shuruudo adag oo loogu talagalay baakadka si loo gaaro heerarka deegaanka. Kharash dhimista ayaa weli ah caqabadda ugu weyn ee soo saareyaasha Ruushka markay dooranayaan baakadaha.
MIDKU WAA QIIMAHA
Tani, dabcan, maahan wax lala yaabo. Soo-saareyaasha baradhada iyo khudradda si fudud uma haystaan ​​lacag dheeri ah: qiimaha badeecadaha ayaa hooseeya dhowr sano, sicirka sarrifka (oo ay la socdaan qiimaha dhammaan waxyaabaha la isticmaalo) ayaa koraya. Intaas waxaa sii dheer, awoodda wax iibsiga ee dalka waxay ku jirtaa heer taas oo ah in qofku si isa soo taraysa uga fikiro bal in baakidh loo wada baahan yahay iyo in kale?
Soo-saarista "eco-materials" dalkeenna lama horumarin, taasoo macnaheedu yahay inay aad uga qaalisan yihiin sidii caadiga ahayd. Haddii uu jiro badeecad noocan oo kale ahi suuqa.
«Qalabka deegaanka u habboon ayaa si fudud looga heli karaa Ruushka, - Faallooyinka Vera Bokareva. - Soosaarayaasha guryaha wali kama xiiseyna iyaga sida wadamada Yurubta horumaray, laakiin xal ayaa laga heli karaa. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u baahan kartaa barasho si ay u eegto waxyaabaha si xeeladaysan. Aynu dhahno shirkaddu markii hore waxay ku xirxiran jirtay alaabteeda baakadaha polypropylene, hadda waxay go'aansatay inay raadiso beddel ku habboon bey'adda. Waa macquul in aysan suurta gal noqon doonin in la helo analoog dhameystiran. Laakiin waad isticmaali kartaa 'pulpercarton' (walax laga isticmaalo wadankeena, tusaale ahaan, soo saarida unugyada ukunta), badeecadan la farsameeyay waxay buuxineysaa shuruudaha deegaanka..
In kastoo hadaad raadiso xulashooyin qalaad oo badan, looma reebay inay ku kacayaan hal dinaar oo qurxoon: tusaale ahaan, filimada khaaska ah ee lagu baayacayo ee ku saleysan alaabta ceeriin ee hadhuudhka, sida ku cad xisaabinta qaarkood, maanta waxay ilaa XNUMX jeer ka qaalisan yihiin analologyadooda.
Shirkadaha yurubiyanku waxay ka shaqeynayaan oo kaliya inay alaabada waarta ka dhigaan, laakiin sidoo kale inay hubiyaan in badeecadahani ay yihiin kuwo ganacsi ahaan waxtar yeelan kara Marka xal baakad cusubi ka muuqato suuqa adduunka, liiska faa'iidooyinkiisa kuma koobna oo keliya saaxiibtinimada deegaanka. Soo-saareyaashu waa inay soo jiitaan dareenka macaamiisha suurtagalka ah xaqiiqda ah in qalabkani leeyahay astaamo macmiil oo aad u fiican, qiimihiisuna uusan ka sareyn (oo inta badan ka hooseeyo) analogues aan dib-loo-cusbooneysiin karin.
Kordhinta qiimaha, habka, qayb ahaan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in dhammaan hal-abuurnimada baakadaha ee horumarsan loo isticmaali karo iyada oo aan la beddelin qalabka baakadaha ee jira.
Booskii ka dambeeyay Soofiyeeti, qalab hal abuur leh ayaa sidoo kale si firfircoon loo abuuray. Tusaalooyinka kuma adka in la helo. Dhawr sano ka hor, saynisyahankii reer Kharkiv Sergei Timchuk wuxuu ikhtiraacay filim baakad bey'adeed u leh bey'adda oo laga sameeyay istaarijka galleyda. Filimku wuxuu ku milmaa biyo karkaraya (isla markiiba) iyo carrada (toddobaadyo yar gudahood), sidoo kale si fudud ayaa loogu cuni karaa cuntada, maadaama maadadu gebi ahaanba aan dhib lahayn.
Iyo macno ahaan Juun 2020, saynisyahano ka socda Astrakhan State Technical University ayaa ka hadlay abuurista filim cunno oo baaba'aya oo ku saleysan ichthyzelatin (oo laga soo saaray qashinka ka soo baxa kalluumeysiga). Sida laga soo xigtay iyaga, walxaha ka soo baxa ayaa awood u leh inay ku tartamaan guryaha macaamiisha qalabka polymer-ka ee caagga ah.
Waxaa jira ikhtiraacyo kale oo xiiso leh, laakiin dad aad u tiro yar ayaa maareeya inay keenaan fikrad dhalaalaysa oo keliya ma ahan in lagu faafiyo warbaahinta, laakiin sidoo kale marxaladda wax soo saar ballaaran.
Xaalad kasta oo gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la xisaabiyo suurtagalnimada dhaqaale ee mashruuca. Oo raadi soosaarayaasha xiisaha leh.
Samaynta saadaalinta sannadka 2020 gaar ahaan way adag tahay. Laakiin weli, waxay u badan tahay, Ruushku wuxuu taageeri doonaa isbeddelka caalamiga ah ee soo bandhigida qalabka bey'ada.
Waxaa jira dhowr dood oo lagu taageerayo noocaan. Ugu horreyn: shirkadaha ugu waawayn ee caalamiga ah (oo ay ku jiraan shabakadaha ganacsiga adduunka) waxay ka shaqeeyaan dhulka dalkeenna, kuwaas oo horumariya shuruudo midaysan dhammaan alaab-qeybiyeyaashooda. Goor dhow ama goor dambe, shuruudahan waxaa sidoo kale loo soo bandhigi doonaa soo saarayaasha Ruushka sidoo kale.
Shirkadaha gudaha waxaa sidoo kale hagta isbeddelada adduunka. Tusaale ahaan, silsiladda tafaariiqda ee Magnit waxay soo bandhigtay Istaraatiijiyaddeeda Horumarineed ee Joogtada ah illaa 2020 ee Juun 2025, taas oo ay ku dhawaaqday hamigeeda ah inay hoggaamiye u noqoto yareynta saameynta deegaanka ee qaybta tafaariiqda Ruushka.
Marka la gaaro 2025, Magnit waxay qorsheyneysaa inay 50% ka sameyso summaddeeda iyo baakideeda wax soo saar ee dib loo cusbooneysiin karo, dib loo isticmaali karo ama la bacrimin karo; ku guuleysano 100% aruurinta iyo dib u warshadaynta caag dib loo warshadeyn karo hawlgalladayada; Iska yaree qashinka cuntada 50%. Laga soo bilaabo 2019, silsiladda tafaariiqda, oo ay weheliso la-hawlgalayaasha, ayaa ku rakibaysa fandomat bakhaarradooda - aalado gaar ah oo macaamiisha looga soo ururinayo weel caag ah iyo aluminium ah oo loogu talagalay soosaarka xiga.
Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee "Magnit" haddaba hadda 70% weelasha jiingado waxaa laga soo saaray waxyaabo dib loo cusboonaysiin karo (waraaqda qashinka), sanaadiiqda kartoonada shaqsiyeed waxaa laga sameeyay baakad dib loo warshadeeyay iyo kartoon aan qoryo lahayn oo u dhigma 60% ilaa 40%; duub duub - 20% dib loo warshadeeyay.
Dukaammada, macaamiisha waxaa la siiyaa xulashada baakadaha: 2015, shabakaddu waxay bilaabeen inay adeegsadaan bacaha waraaqaha, iyo 2017, bacaha dib loo isticmaali karo. Sannadkan, shirkaddu waxay gebi ahaanba u wareegtay bacaha laga sameeyay 20% caag dib loo warshadeeyay.
Dabcan, uma badna in dalka oo dhan awoodi doono inuu heerkan gaaro 2025.
“Tani su’aal ma ahan labada ama seddexda sano ee soo socota, - Vera Bokareva ayaa qortay, - laakiin toddobo sano ayaa dhaafi doonta, Ruushka sidoo kale waa la dhisi doonaa. Suuragal ma ahan in talo caalami ah la siiyo qof walba, laakiin aniga aragtidayda, shirkadaha waawayn ee dhaqaalaha ku leh horumarka waa inay si aad ah ugu lug yeeshaan mowduucan. "
Marka, saaxiibtinimada bey'adeed waa, illaa xad, mid ka mid ah xuduudaha mustaqbalka ee baakadaha Ruushka. Laakiin ereyo kooban waa in laga dhahaa isbeddellada maanta jira.
Sida laga soo xigtay khubarada, macaamiisha casriga ah, kuwa wax iibiya iyo kuwa iibsada wax soo saarka khudradda waxay ku qiimeeyaan baakadaha (marka lagu daro dhaqaalaha, oo aan hore u soo sheegnay) ku habboonaanta iyo u hoggaansanaanta astaamaha alaabta la dhex dhigay.
AUCHAN Tafaariiqda Ruushka, gaar ahaan, waxay ku talineysaa in alaab-qeybiyeyaasha khudaarta, markay dooranayaan baakadaha, ay isticmaalaan xirmo qulqulaya oo qulqulaya halkii ay ka ahaan lahaayeen filimka cuntada (si loola dagaallamo uumiga iyo caaryada), iyo in laga hortago qoyaan badan iyo qudradda oo qudhuntay - kaartooyinka ka sameysma beddelka polyurethane.
Kuwo badan ayaa sidoo kale ka hadla vector waara oo hoos u dhiga mugga baakadaha, taas oo loo aaneynayo kororka tirada qoysaska qofkiiba.
"Xilligan, macaamiisha ayaa caqli gal ku ah wax iibsigooda, - faallooyinka fikirkaan Olesya Stemashenok, maareeyaha isgaarsiinta ee adeegga saxaafadda ee AUCHAN Retail Russia. - Micno malahan macaamilka inuu iibsado 5 kg oo baradho ah haddii uu cuno wax aan ka badneyn 1 kg bishii, maadaama inta lagu jiro keydinta muddada dheer sheyga uu soo bixi karo / cagaar noqon karo waana in la tuuraa".
"Tani sidoo kale waa isbeddel dheer, - Vera Bokareva ayaa sii socota, - iyo, dabcan, horumarkiisa macnaheedu maaha gebi ahaanba in baakado waawayn ay ka baaba'idoonaan suuqa ama dadku ay joojin doonaan iibsashada khudradda oo aad u tiro badan. Laakiin kuwa khudaarta keena ee doonaya inay kasbadaan xadad dheeri ah waa inay tixgeliyaan oo ay ku soo bandhigaan xirmooyinka yaryar noocyadooda, taas oo ay ku jiri doonaan sida saxda ah khudradda qofkiiba u baahan yahay halkii adeeg. Ama isticmaal baakad loo habeeyay xaaladaha isticmaalka: cunnooyin, cunto fudud oo waddada ku jirta, khudradda oo gogol loo diyaarshay, iwm. Intaa waxaa dheer, in alaabooyinka la dhaqo, qurux badan yihiin, baakadahana laftoodu waa inay indhaha ka farxiyaan".
Qiyaasta ugu dambeysa, dabcan, waa mid shakhsiyan ah, in kasta oo adduunka naqshadeynta baakadaha sidoo kale ay leedahay moodel u gaar ah. Waqtigaan la joogo, sida ay sheegtay Vera Bokareva, jihada guud ee shaqadu waxay dejineysaa ujeedo fududeyn. Macaamiilku waxay doorbidaan xalalka laconic xakameynaya, iyagoo diidaya xulashooyinka "qaaliga ah". Naqshadeynta, sawirrada aan-miisaanka lahayn ayaa badanaa la adeegsadaa - flat graphics kuwaas oo ku habboon suuqa adduunka.
Guusha xakamaynta "Aasiyaanka", sida laga soo xigtay khabiirka, waxay sabab u tahay isbeddelada yurub, iyo sidoo kale rabitaanka soo saarayaasha si loo hagaajiyo xiriirka macaamiisha iyada oo loo marayo farriimaha fudud iyo, dabcan, in aan la bixin.
Laakiin waxaa jira isbeddello kale sidoo kale. "Haddii aan ka hadlayno qaybta miraha iyo khudaarta, halkaasoo weli sumcadda ay ka socoto, laakiin ay jirto meel u jiheysan dhankaas, - ayay tiri Vera Bokareva, - Waxaa jira isbeddel ku aaddan adeegsiga midabbo aan caadi ahayn oo loogu talagalay qaybta wax soo saarka ee naqshadeynta baakadaha. Ma aha wax adag in la go'aamiyo kuwa aad u baahan tahay: kaliya dhex mar dukaamada, si taxaddar leh u eeg noocyada baakadaha ee baakadaha ee alaabooyinka la midka ah oo fahmaan waxa rinjiyeyaasha aan halkan ku oollin. Talaabadani waxay kaa caawin doontaa inaad ka go'do tartamayaasha. ".
Si kastaba ha noqotee, farsamadan mar dambe lama oran karo waa hal abuur - iyo sidoo kale adeegsiga lambarrada QR ee naqshadeynta, iyadoo la akhrinayo macmiilku ka helayo macluumaadka ku saabsan halka ay wax soo saarka ku koray iyo cunnooyinka suxuuntaan kaladuwan ay ku habboon yihiin. " Tani maahan ikhtiraac, laakiin waxay calaamad u tahay dhadhanka wanaagsan, ikhtiyaar dheeri ah oo shaqeynaya ", - khabiirka ayaa sharxaya.
Dhanka kale, waxaa habboon in la muujiyo qaybta baakadaha ee alaabada lagu iibiyo dukaamada internetka. Sannadkan, iibka noocan ahi wuxuu helay dhiirigelin xoog leh oo xagga horumarka ah, ku dhowaad wax kasta ayaa laga iibsan karaa shabakadda. Ilaa iyo inta iibiyeyaashu ay ogaadeen in isku baakadaha ay si kale ugu muuqdaan buug-yaraha ku yaal bogga iyo khaanadda dukaanka, - Vera Bokareva ayaa tixgelinaysa. - Laakiin waxaa jira tusaalooyin isa soo taraya oo ku saabsan naqshadeynta internetka ee maalin kasta guuleysta. "
Khabiirka ayaa sidoo kale si gaar ah u kala soocaya laba isbeddel oo si toos ah loo jiheeyey markii la dooranayo nooca baakadaha ee alaabada internetka. Soosaarayaasha qaar waxay diirada saaraan amaanka alaabada la keenay: baakidhkoodu wuxuu isu badalaa mid mug leh, oo leh tab si loo ilaaliyo badeecada, iwm. Qaar kale waxay isticmaalaan mabda'a yurubiyaanka dhaqaalaha iyo, ilaa xad, saaxiibtinimada deegaanka: kiiskan, ugu yaraan alaabada ayaa loo isticmaalaa wax soo saarka (iyo khafiifinta baakadaha, hoos u dhig culeyska rarka). In kasta oo xulashada xalka hubaal ay sabab u tahay astaamaha sheyga. Caadi ahaan: habka loo raro gaadiidka strawberries iyo baradhada waa in lagu kala duwanaadaa qeexitaan ahaan.
Tags: 2020 .3baakadaha 2020Baakadaha baradhadaqalabka deegaanka